Tsvaga 5 yemaguta eFrance anonakidza kwazvo Bezzia
Susana Garcia | 07/04/2021 10:00 | Lifestyle, famba
France inyika izere nemakona anoyevedza. Maguta aro ane maitiro uye tinoda Paris kana Bordeaux, asi kupfuura kwavo zvinogoneka tsvaga inoshamisa misha yeFrance inotora mweya wako. Dzimwe nguva unofanirwa kubva kumaguta kuti uwane nzvimbo dzinoshamisa kwazvo dzine hunhu hwakanyanya.
En France kune akawanda akanaka maguta, asi nhasi tichataura nezvevashanu vavo. Kana iwe uchida idzi mhando dzekushanya, cherekedza dzese dzese nekuti yega yega ine chimwe chinhu chinonakidza chekupa. Saka nakidzwa nenzvimbo nyowani dzekushanyira dzaunofanirwa kurova muFrance.
Iri taundi riri muDhipatimendi reRoti uye rine kushanya kwakawanda, kuve kuseri kweMont Saint-Michel. Munzvimbo iyi maitove nekuvapo kwevanhu muUpper Paleolithic, sezvo iine Cueva de las Maravillas, bako rine prehistoric bako mapendi. Iri iguta rakakwanisa kutsausa iyo Camino de Santiago uye kuti nhasi inoshanya kwazvo. Kumwe kwekushanya kukuru munzvimbo ino inhare, kwaunogona kuona mawere nemaonero eguta rese. Kuti udzike pasi kuti uone guta racho iwe unogona enda neCamino de la Cruz kana neyepasi pevhu funicular. Iyo yezana ramakore rechiXNUMX Puerta de San Marcial inopa nzira kunzvimbo dzinoyera nenzvimbo tsvarakadenga yenzvimbo tsvene. Uyewo haufaniri kupotsa kereke yeSan Amador kubva muzana ramakore regumi nematatu.
Iyi nzvimbo, iyo yaive yatove nevanhu muzana ramakore rechina BC, inopa inoshamisa nhare iyo isingasiyi munhu asina hanya. Iyi medieval citadel iri kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva inotipa kukwezva kukuru. Zvirinani kuti uishanyire mumwaka wakaderera kuti urege kuzviratidza pane zvakawandisa kushanya. Iyo citadel ine anopfuura makiromita matatu emadziro ine yekunze uye yekuvharirwa kwemukati uye pakati padzo madzvinyu, nzvimbo yakati sandara iyo yakakomberedza citadel. Mumuzinda mune shongwe dzakawanda, magedhi akaita seNarbonne Gate, ayo anowanzo kuve suwo rekupinda, uye kunyangwe nhare. Isu tinofanirwa kuonawo Basilica yeSaint-Nazaire, iine zvimwe zvinhu zveRomeesque asi yakatarisa yakatarisa yeGothic.
Iri taundi riri paCamino de Santiago kumaodzanyemba kweFrance. MuConques iwe unofanirwa kunakirwa nekufamba kwakanaka nemumigwagwa yayo, uchiona dhizaini yedzimba dzayo, nemapuranga emapuranga uye slate padenga. Iyo shongwe huru yeguta ndiyo Romanesque maitiro Abbey yeConques mune iyo Portico yeFinal Judgment inomira. Mariri iwe unogona zvakare kuona iyo Treasury Museum ine zviyero. Dzisingafanirwe kupotsa ndidzo nzvimbo dzinoshanda mhizha nezvitoro zvidiki mumusha.
Izvi ndizvo yaifunga guta rakanakisa muAlsace. Iyo ine yakasarudzika denderedzwa dhizaini yezvokutengeserana zvinangwa. Anenge makiromita mashanu kubva pane maonero ekutenda chimiro cheguta. Iwe unofanirwa kushanyira Rue du Rempant nekuti ndiwo mugwagwa watinogona kuona iko kwechokwadi iko kwekuvakwa kweguta. Iyi zvakare inzvimbo inotorwa mifananidzo kwazvo yeguta, imba yeLe Pigeonnier iri pakona uye inoparadzanisa migwagwa miviri. Isu tinofanirwa zvakare kuona iyo Nzvimbo du Chateau, iyo yakakosha mraba munzvimbo ine Fontana deSanta Leon iri pakati.
Iyi ndiyo imwe yemaguta anoyevedza ausingafanire kupotsa. Kana iwe ukapinda kuburikidza ne Rue Grande iwe unowana iyo Place de la Grande Fontaine unova waiva musika wekare wepamusika. Kumashure kwayo kune Church Square, iine Chechi yekutendeuka kwaSaint Paul. Munzvimbo yekumaodzanyemba pane nzvimbo yekutarisisa iri pamusoro pemakuva, iyo nzvimbo inopa akanakisa maonero eguta rese.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Lifestyle » Maguta mashanu muFrance kwaungade kugara